Koko Luso, Working
at Sexy Service & Trainner
at Europe & Asia Commercial Co., Ltd.
“ ငတ် မ ပြေ တဲ့ .. ဆား ငံ ရေ “ မောင် မောင် ထန် ရေး သည် ။ ကျ နော့် နံ မယ် က တိုး ဇော် ပါ...။ကျ နော် က မွေး ချင်း မောင် နှမ မ ရှိ တဲ့တ ဦး တည်း သော သား တ ယောက် ဖြစ် ပါ တယ်..။ ကျနော့်အ ဖေ နဲ့အ မေ က သား တ ယောက် ထဲ မို့လား မ သိ ဘူး.....နယ် မှာ နေ တဲ့တူ... တူ မ တွေ ကို ရန် ကုန် ခေါ်ပြီး ကျောင်း ထား ပေး ပါ တယ်..။ အမေ့ဖက် က တူ မ ၀မ်း ကွဲ ....သက် ထား လွင် နဲ့မေ အေး လွင် ဆို တဲ့ညီ အ မ နှစ် ယောက် က မော် လ မြိုင် ဖက် က ပါ..။ ကျ နော် တို့နဲ့လာ နေ ပါ တယ်...။ အ ဖေ့ဖက် က အ ဖေ့ညီ ၀မ်း ကွဲ ရဲ့သား ..မောင် မောင်စိုး ကို လဲ ခေါ်ထား ပြီး အ ဖေ့ကို ကား မောင်း ပေး ခိုင်း ပြီး နေ စေ ပါတယ်..။မောင် မောင် စိုး က စာ ပေး စာ ယူ နဲ့ကော လိပ် ကျောင်း တက် နေ တာ ပါ..။ ကျ နော် ငယ် ငယ် က အ ထူး သ ဖြင့်ကာ မ ရာ ဂ နဲ့ပတ် သက် ပြီးတော် တော် ဒုံး ဝေး (တုံး အ )ခဲ့တာ ပါ...။ဆန့်ကျင် ဖက် လိင် (မိန်း မ ) ကို စိတ် ၀င် စား တဲ့စိတ် က အ သက် ၁၀ နှစ် လောက် ထဲ က ပေါ် ပေါက် နေ ပါ ပြီ..။ ဒါပေ မဲ့ ..မိန်း မ ကို လိင် ဆက် ဆံ တဲ့အ ကြောင်း တော့နား မ လည် သေး ပါ ဘူး..။ ကျ နော့်ကို လိင် ပ ညာ ကို စ ပြီး သင် ပေး တဲ့လက် ဦး ဆ ရာ က တော့ ကျ နော့်ရဲ့အ ကို ၀မ်း ကွဲ တော် တဲ့မောင် မောင် စိုး ပါ..။သူ က ကား ဂို ဒေါင် က ထပ် ခိုး ပေါ် မှာ နေ ပါ တယ်..။ကျ နော် ကသူ့ဆီ အ မြဲ သွား ပြီး (နှာ စာအုပ် ) လို့ကျ နော် တို့ခေါ် ကြ တဲ့ ... ကာ မ စပ် ရှက် တဲ့အ ကြောင်း တွေ ကို တစ် တစ် ခွ ခွေ၇း ထား တဲ့ဇာတ် လမ်း တွေ ကို ဖတ် လေ့ရှိ ပါ တယ်...။ မောင်မောင် စိုး က စာ အုပ် တွေ ပေး ဖတ် ရုံ မ က ဘူး ...လိင် တန် ဆာ ( လီး ) တောင် မတ် လာတဲ့အ ခါ ရှေ့တိုး နောက် ငင် လုပ် ပြီး က စား ပေး တဲ့( ကွင်း တိုက်အာ သာ ဖြေ ) တာ ကို ပါ သင် ပေး တော့တာ ကျ နော် လဲ သူ သင် တဲ့အ တိုင်း လီး ကို ဆော့က စား တော့အ လွန် ကောင်း တဲ့ကာ မ အ ရ သာ (ကောင်းခြင်း...အ ထွတ် အ ထိပ် ) အ ကြောင်း ကို တွေ့ရှိ သွား ပြီး..နေ့တိုင်း လို ဘဲ ကွင်း တိုက် တော့တာ ပါ ဘဲ....။ ကာ မ ပ ညာ တွေ သိ လာ တဲ့ကျ နော် ဟာ မိန်း မ တွေ က်ု ပစ် မှား တတ် လာ ပါ တယ်..။အ သက် ၁၃ နှစ် လောက် ရောက် တဲ့ အ ခါ တ နေ့ကို ၇ ခါ အ ထိ...ကွင်း တိုက် တဲ့အ ထိ ကာ မ စိတ် တွေ ပြင်း ထန် လာ ပါ တယ်...။ ကျောင်း မှာ လဲ မိန်း က လေး တွေ ရဲ့ကိုယ် လုံး ကို တပ် မက်စွာ ကြည့်တတ် လာ တာ အ တူ ကျောင်း သွား တဲ့ညီ မ ၀မ်း ကွဲ မေ အေး လွင် က တွေ့သွား ခဲ့တယ်...။ မေ အေး လွင် က ကျ နော့်ထက် ၁ နှစ် လောက်ငယ် ပါ တယ်..။ (ကို တိုး...ကို တိုး က မိန်း က လေး တွေ ကို သိပ် ကြည့်တာ ဘဲ..ကြိုက် လို့လား...) လို့မေး တယ်..။ ကျ နော် လဲ “ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ဟာ..နင် ကလဲ..“လို့ငြင်း ခဲ့ပေ မဲ့တ ကယ် တော့မိန်း က လေး တွေ လမ်း လျှောက် တာ ဖင် တုံး တွေ လှုပ် ခါ နေ တာ ကို အ မြဲ ကြည့်ပြီး စိတ် မှန်း နဲ့ပစ် မှား နေ ခဲ့တာပါ ဘဲ...။ မေ အေး လွင် ဖင် တွေ ကို လဲ လစ် ရင် ကြည့်တာ ပေါ့ ..။ဘယ် နေ ပါ့မ လဲ ဗျာ..။ မေ အေး လွင် ရဲ့အ မ ..သက် ထား လွင် က ကျ နော့်ထက် ၆ နှစ် လောက် ကြီး ပါ တယ်..။ ကျ နော် က “ မ မ သက် “ လို့သူ့ကိုခေါ် ပါ တယ်..။ သက် ထား ခင် က အ သား ဖွေး ဖြူ ပြီး မြန် မာ မိန်း က လေး တွေ ထဲ မှာ အ ရပ် မြင့်တယ် လို့ဆို ရ ပါ မယ်..။ ပေါင် တန် သွယ် ပြီး ရှည် တယ်..။သိပ် တောင့်တဲ့ကိုယ် လုံး တော့မ ဟုတ် ပေ မဲ့ ..၀၀ တုတ် တုတ် မ ဟုတ် ဘဲ ပိန် ပါး တာ ကြောင့် ကျ နော် အ လစ် မှာ ခိုး ခိုး ကြည့်မိ ပါ တယ်..။ မ မ သက် ကို ၀တ် လစ် စ လစ် ...အ ၀တ် မ ပါ ဘဲ ဘဲ တွေ့ရ ရင် သိပ် ကောင်း မှာ ဘဲ ဆို တာ ခေါင်း ထဲ ၀င် လာ တယ်..။ မ မ သက် နဲ့မေအေး လွင် တို့ထ မိန် ဖြန့်ဝတ် တဲ့အ ခါ...ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ပြီး င ရုတ် သီး ထောင်း တဲ့အ ချိန် အောက် စ လွတ် တဲ့အ ခါ...ဖျတ် က နဲ..တွေ့လိုက် ရ တဲ့ ဖင် ၀င်း ၀င်း အိ အိ တွေ...အ မွှေး ရေး ရေး နဲ့စောက် ပတ် တွေ ကို တွေ့ရ တတ် တယ်..။အဲ ဒီ လို တွေ့ရ ရင် ကျ နော့်ရဲ့လီး ဟာ တား လို့ဆီး လို့မ ရ နိုင်အောင် ဘဲ တောင် မတ် ...တင်း မာ...တာ ဘဲ..။ ဒါ နဲ့အ ကို ၀မ်း ကွဲ မောင် မောင် စိုး ကို ဖွင့်ဟ တိုင် ပင် တယ်..။ ကာ မ နဲ့ပတ် သက် ရင် မောင် မောင် စိုး က ကျ နော့်ရဲ့လက် ဦး ဆ ရာ ဘဲလေ..။မောင် မောင် စိုးက “ဒါ ဟာ သ ဘာ ၀ ဘဲ..တိုး ဇော်...ယောက် ကျား ဆို တာ နှစ် မျိုး ဘဲ ရှိ တယ်....နှာ ဘူး နဲ့ဂန် ဒူး ...ဒီ တော့ဒူး ရင် ဒူး...မ ဒူး ရင် ဘူး..ဘဲ..။ သ ဘာ ၀ အ တိုင်း ယောက် ကျား က မိန်း မ ကို လိုး ချင် တာ အ ပြစ် မ ဟုတ် ဘူး ဟ“ လို့ပြော တယ်..။ ည ဖက် ဆို ရင် မောင် မောင် စိုး နေ တဲ့ကား ဂို ဒေါင် ထပ် ခိုး မှာ မောင် မောင် စိုးပေး ဖတ် တဲ့ကာ မ ပ ညာ ပေး စာ အုပ် တွေ ဖတ်...သူ့အ တွေ့အ ကြူံ တွေ နား ထောင်..နဲ့ကာ မ ရာ ဂ ကို အ လွန် အ မင်း ခုံ မင် နေ မိ တဲ့ကျ နော့်ကို.. မောင် မောင် စိုး က “လက် တွေ့ကွင်း ဆင်း ရမယ်...“ ဆို ပြီး မိန်း မ တ ယောက် နဲ့တွေ့ပေး ပါ တယ်..။ “ကွင်း ဖွင့်ပွဲ..ပေါ့ကွာ....ပ ထ မ ဆုံး ဆို တော့ အ ရေး ကြီး တယ်...မင်း ကို သ ဘော ကောင်း ပြီးသင် ပေး ပြ ပေး မဲ့ဆော် နဲ့လိုး ခိုင်း မှ ဖြစ် မယ်..။ “မောင် မောင် စိုး က ပိုက် ဆံ ရှာ ခိုင်း တယ်..။ ကျ နော့်အ တွက် က သိပ် မ ခက် လှ ပါ ဘူး..။ အ မေ့ဆီ က အ ကြောင်း အ မျိုး မျိုး ပြ ပြီး တောင်း တာ ပါ ဘဲ...။ တ နေ့ကျောင်း အ ပြန် မောင် မောင် စိုး ကား နဲ့လာ ကြို တော့အိမ် မ ပြန် သေး ဘဲ...မောင် မောင် စိုး ရဲ့သူ ငယ် ချင်း တ ယောက် ရဲ့အ ခန်း ကိုဝင် ကြ တယ်..။အဲ ဒီ မှာ ကြို တင် ချိန်း ထား တဲ့မ ချို ဆို တဲ့မိန်း မ နဲ့ဆုံ ကြ တယ်..။ မ ချို က ကျ နော့်ထက် နဲ နဲ အ သက် ကြီး ပုံ ရ တယ်..။မောင် မောင် စိုးပြော ချက်အ ရ သိ ရ တာ ကြေး စား ဖါ တော့မ ဟုတ် ဖူး ..။ရပ် ကွက် ထဲ က လမ်း သူ ရဲ (ဆိုး သွမ်း လူ ငယ်) ခေါင်း ကြီး ဆို တဲ့ကောင် က ရီး စား အ ဖြစ် အ မြဲခေါ် ဆော် နေ တဲ့မိန်း မ တဲ့ ..။ခေါင်း ကြီး ကို မ ချို က ကြောက် ရ တယ်.ဘယ် လို အ နိုင် ကိုင် ထား လဲ တော့မ သိ ဘူး..။ခေါင်း ကြီး က တ ခြား လူ နဲ့လွှတ်ပေး တတ် တယ်..။ မောင် မောင် စိုး က ကျ နော် ပေး တဲ့ပိုက် ဆံ နဲ့ခေါင်း ကြီး ကို အ ရက် အ ၀ တိုက် ...ဆေး ခြောက် အ လုံ အ လောက် ၀ယ် ပေး ပြီး မ ချို နဲ့ ကျ နော့် ကို ဆုံ ဖို့စီ စဉ် တာ ပါ..။ လက် ဦး ဆ ရာ မောင် မောင် စိုး ကို ကျ နော် အ ထင် ကြီး လေး စား သွား ရ တယ်..။ အဲ ဒီ မ ချို က တော် တော် ကြည့်ကောင်း တယ်..။ဆံ ပင် တို လေး နဲ့အ သား ၀င်း ၀င်း နဲ့တောင့်လဲ တောင့်တယ်..။ ကျ နော် လဲ မောင် မောင် စိုး လက် ထဲ ထည့်ပေး တဲ့ရာ ဘာ အ စွပ် (အဲ ဒီ တုံး က အက်ဖ်အယ်လ် လို့ခေါ် ကြ တယ်...) လေး လက် က ကိုင် ပြီး မ ချို နဲ့အိပ် ခန်း ထဲ ၀င် ရ တာ ပေါ့ ..။ မ ချို က ပြုံး ပြ ပြီး...“ မောင် လေး က တ ခါ မှ မ လုပ် ဖူး ဘူး ဆို...“လို့မေး တယ်..။ ကျ နော် လဲ စိတ် တွေ လှုပ် ရှား နေ တော့ခေါင်း ဘဲ ငြှိမ့်ပြ လိုက် တယ်..။ “ကဲ ...အ ၀တ် တွေ ချွတ် လေ..” မ ချို က သူ့ အ ၀တ် တွေ ကို ချွတ် ရင်း ပြော တယ်..။ အင်း....ကျ နော့်ဘ ၀ မှာ ပ ထ မ ဆုံး ကိုယ် လုံး တီး မိန်း မ ကို တွေ့ဖူး ရ တာ ပါ..။ “ဟယ်တော့ ...မောင် လေး က ရယ် ဒီ ဖြစ် နေ ပြီ ဘဲ..“မ ချို က ကျ နော့်တောင် မတ် နေ တဲ့လီး ကို ကြည့်ပြီး ပြော တယ်..။ “တော် တော် ကြီး တာ ဘဲ....ဟင်း..ဟင်း..“မ ချို က ကျ နော့်လကိ ကို ဆွဲ ပြီး ကု တင် လေး ပေါ် ကို တက် တယ်..။ ကျ နော့်ပါး ကို သူ့နှ ခေါင်း လေး နဲ့မ ထိ တ ထိ လေး စ ပွတ် ပြီး လက် တ 1 of92.
ဖက် က ကျ နော့်လီး ကို ဖွ ဖွ လေး ကိုင် လိုက် ပါ တယ်..။ “မာ လိုက် တာ..ကောင်း လိုက် တဲ့ဟာ ကြီး...“ မ ချို အ သံ ကညု တု တု နဲ့ ..။ မ ချို က ကာ မ သင် ခန်း စာ များ စ တင် ပို့ချ ပါ တော့တယ်..။ ရာ ဘာ အ စွပ် စွပ် နည်း က အ စ....နည်း မျိုး စုံ...ပုံ စံ မျိုး စုံ ...သ ဘော ကောင်း ကောင်း နဲ့ သင် ပြ ပေး ပါ ပြီ..။မ ချို က ဒု တိ ယ လက် ဦး ဆ ရာ ပေါ့ဗျာ..။ အဲ ဒီ နေ့က အိမ် အ ပြန်....“တိုက် ပွဲ နိုင် ပြီး ပြန် လာ တဲ့စစ် သူ ကြီး တ ယောက် ရဲ့အ ပြုံး“ လို့တင် စား ရ မဲ့အပြုံး မျိုး နဲ့ပေါ ...။့သက် ထား လွင် ( မ မ သက် ) က ကျ နော် ဒီ လို ဆန့်ကျင် ဖက် လိင် ကို စိတ် ၀င် စား. နေ တာ ကို တော့မ ရိပ် မိ ပါ ဘူး..။ တ နေ့ဗွီ ဒီ ယိုည ဖက် ကြည့်ကြ တာ မေ အေး လွင် က မ နက် ကျူ ရှင် ရှိ လို့ဆို ပြီး မ ကြည့်ဘူး..။မ မ သက် နဲ့ကျနော် စ ကြည့်တုံး က အက် ရှင် ကား ဆို ပြီး ကြည့်တာဇာတ် ကား အ လည် လောက် လဲ ရောက် ရော ကြောက် စ ရာ ဇာတ် လမ်း ဖြစ် နေ တယ်..။မ မ သက် လဲ ကျ နော့်နား တိုး ကပ် ထိုင် တာ ကျ နော် လဲ မမ သက်ဖင် တွေ ပေါင် တွေ နဲ့ပူး ကပ် နေ တာ မို့ရင် တွေ ခုန် ပြီး ကာ မ စိတ် တွေ ထ လာ တာ ပေါ့ ..။ဇာတ် လမ်း ဆုံး သွား တော့ ည က လဲ နက် နေ ပြီ..။တ အိမ် လုံးလဲ တိတ် ဆိတ် မှောင် နေ တယ်..။မ မ သက် က “ မ မ ကြောက် တယ် ကို တိုး“ လို့ပြော ပြီး...“မမ အိမ် သာ တ ယောက် ထဲ မ သွား ရဲ ဘူး...လိုက် ခဲ့ပေး မလား“ မေး ပါ တယ်..။ကျ နော် လဲ မ မ သက် နဲ့အိမ် သာ သွား ရ မယ် ဆို တာ ဘယ် ငြင်း မ လဲ..။ခေါင်း ငြိမ့်ပြ ပြီး မမ သက် နောက် က လိုက် သွား တာ ပေါ့ ..။အိမ် သာ က ကျနော် တို့အိမ် ကြီး ရဲ့အ နောက် ပိုင်း အ ထိ စ တို ခန်း တွေ..အ ခန်း လွတ် တွေ ကို ဖြတ် သွား ရ ပြီး မီး က လဲ သိပ် မ လင်း လှ ဘူး လေ...။မ မသက် အ နောက် က မ မ သက် ရဲ့တင် ကား ကား တွေ ကို တပ် မက် ရင်း လိုက် သွား ရ တာ ကျေ နပ် နေ မိ ပါ တယ်...။ မ မ သက် ၇ဲ့တင် တွေ က အ လုံးလိုက် ကြီး ဗ ရမ်း ဗ တာ တုံ ခါ တာ မျိုး မ ဟုတ် ဘူး..။တုံ ခါ တယ် ပြော မ လား..။ စိတ် ကို ဆူ ကြွ စေ တယ်..။ ကျ နော် ထင် တာ က အိမ် သာ အ ပြင် မှာ စောင့် ခိုင်း မှာ ဘဲ ပေါ့လေ ။မမ သက် က အိမ် သာ ထဲ အ ထိ ခေါ် တော့စိတ် ထဲ ထိတ် က နဲ ပျော် သွား တာ ပေါ့ ..။ မမ သက် က အိမ် သာ ထဲ ရောက် တော့ ..“ကိုတိုး...မ မ သေး ပေါက် အုံး မယ်...ကျော ခိုင်း ပြီး နေ ပေး“ လို့ပြော တာ နဲ့ကျ နော် လဲ မမ ပြော တဲ့အ တိုင်း နေ ပေး လိုက် တယ်..။အိမ် သာ က ရေ ချိုး ခန်း နဲ့ တွဲ ရက် ...တော် တော် ကျယ် တယ်..။ စိတ် ထဲ က တော့မ မ သက် သေး ပေါက် တာ ကို အ ရမ်း ကြည့်ချင် နေ တာ..။ မျက် စိ နဲ့မ မြင် ရ ပေ မဲ့အ သံ ကြား နေ ရ တာ ကြောင့် ..နား ကို အ စွမ်း ကုန် စွင့်ထား မိ တယ် ။မ မ သေး တွေ က အိမ် သာ ခွက် နဲ့ထိတဲ့အ သံ ကြား နေ ရ တာ ရင် တွေ ခုန် မိ တာ အ ရမ်း..။ နောက် ကို ဒီ လို လိုက် ရ တဲ့အ ခွင့်အ ရေး မ ရ တော့မှာ ကြောက် တာ ကြောင့်နောက် ကို လှည့်မကြည့်ရဲ..။ မ မ က ရေ ခွက် လေး နဲ့သူ့စောက် ဖုတ် ကို ရေ ဆေး သံ ကို ဆက် ကြား ရ ပြန် တယ်..။ စိတ် ထဲ က တော့မ မ စောက် ဖုတ် ကို မြင် ချင် လိုက် တာအ ရမ်း ပေါ့ ..။ မမ သက် အိမ် သာ ခွက် က နေ ထ လာ ပြီး ကျ နော့်ဘေး ရောက် လာ တယ်..။“ကို တိုး....သေး ပေါက် အုံး လေ...“ “အင်း...ပေါက် မယ်..“ကျ နော် လဲ ဘောင်း ဘီ တို လေး ၀တ် ဆဲ အ ချိန် ဆို တော့ ပေါင် ရင်း လောက် ထိ ဆွဲ ချွတ် ချ ပြီး လ ပြွတ် လေး ကို ကိုင် ပြီး သေး ပေါက် လိုက် တယ်..။ဟင်..မမ သက် က သေ သေ ချာ ချာ ကြည့်နေ ပါ လား..။ဟွန်း..သူ ကျ တော့ကျ နော့်ကို ကျော ခိူင်း ထား ခိုင်း ပြီး...ကျ နော့်အ လှည့်ကျ တော့လာ ကြည့်နေ ပါလား.... မ မ သက် က ခစ် ကနဲ ရီ လိုက် လို့ ..“ဘာ ရီ တာ လဲ..မ မ သက်...ဘာ လာ ကြည့်တာ လဲ...“လို့ကျ နော် မေး လိုက် ပါ တယ်..။မ မ သက်က ပြုံး ပြီး..“အော်..ကို တိုး ပြွန် လေး ကို ကြည့်တာ..မ မ က မ မြင် ဘူး ဘူး လေ...ယောက် ကျား ဟာ ကို...“လို့ပြော တယ်..။ “ မ မ ကျ တော့ကျ နော့်ကိုကျော ခိုင်း ထား ခိုင်း တယ်..မ တ ရား ဘူး..““ဟိတ်..ဘာ လဲ..ကို တိုး က မ မ သေး ပေါက် တာ ကို ကြည့်ချင် လို့လား..“ရီ ပြီး ပြော ရင်း အိမ် သာ ထဲ က လှမ်း ထွက် လိုက် တယ်..။ “ မ မ က တော့ကျ နော့် ကို ကြည့်တယ် လေ....“ မ ကျေ မ နပ် ပြော တဲ့ကျ နော့်ကို လှမ်း ဆိတ် လိုက် ပြီး..“ရှီုး..တိုး တိုး..ဘယ် သူ မှ လျှောက် မ ပြော နဲ့နော်..မ ကောင်း ဘူး...“အ သံတိုး တိုး နဲ့ပြော တယ်..။ အဲ ဒီ ည က စ ပြီး ကြောက် စ ရာ ကောင်း တဲ့ဇာတ် ကား တွေ ဘဲ များ များ ကြည့် ဖို့ကျ နော် ဖန် တီး ပါ တော့တယ်..။မ မ ကျ နော့်ကိုအိမ် သာ ထဲ ခေါ် အောင် လေ...။ မ မ က လဲ ကျ နော် ဖြစ် စေ ချင် သ လို ဘဲ ခေါ် သွား တော့မ မ က ထုံး စံ အ တိုင်း..ကျော ခိုင်း ဖို့ပြော ပေ မဲ့မ သိ မ သာမျက် စိ ထောင့်ကပ် ပြီး ကြည့်ပါ တယ်..။ မ မ ထ မိန် လှန် လိုက် ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လိုက် တော့ဖြူ ဖွေး တဲ့ပေါင် တန် ၂ ချောင်း နဲ့အ မွှေး ကြဲ ကြဲလေး ဖုံး နေ တဲ့ဆီး ခုံ ဖေါင်း ဖေါင်း ကြီး နဲ့အ ကွဲ ကြောင်းပန်းေ၇ာင် လေး ကို ဖျတ် က နဲ တွေ့လိုက် ရ တာ ကျ နော့်ဖွား ဖက် တော် လိင် တန် လေး လဲ ဆတ်က နဲ ထောင် မတ် သွား ရ တော့တယ်..။ မ မ ရဲ့အ ကွဲ ကြောင်း လေး ထိပ် နား က သေး တွေ ပန်း ထွက် လာ တာ ရော..မ မ သူ့စောက် ဖုတ် ကို ရေ ဆေး တာရော...တွေ့လိုက် ရ တာ သ ဘော ကျ လိုက် တာ အ ရမ်း ပါ..။ “ မ မ ကို ခိုး ကြည့်တယ် ထင် တယ်..“ မ မ သက် က ပြုံး ပြီး ပြော ရင်း ကျ နော့်ကို အိမ် သာ ခွက် ဖက် တွန်း ပြီး သေး ပေါက် ခိုင်း ပါတယ်..။ကျ နော် သေး ပေါက် တော့ ..ပြောင် ဘဲ လာ ကြည့်ပြီး လီး တောင် နေ တာ မြင် သွား ပါ တော့ တယ်..။“ဟယ် တော့ ..မာ ပြီး ထောင် နေ ပါ လား...ခု ကျတော့ တော် တော် ထွား ပြီး ရှည် လိုက် တာ..“လို့ပြော ပါ တယ်..။အိမ် သာ က အ ထွက် မ မ က ရှေ့က သွား တော့မ မ ရဲ့ ဖင် နှစ် လုံး တုံ ခါ သွား တာ ကျနော် ငေး ကြည့်ရင်း စိတ် နဲ့ပစ် မှား နေ မိ ပါ တယ်..။ မ မ က ည ဖက် သူ နဲ့ကျ နော် နဲ့ဘဲ ဗွီ ဒီ ယို ကြည့်မှ ကြောက် တယ် ဆို ပြီး အိမ် သာ ထဲ ခေါ် သွား တာ ပါ..။ဒါ ကြောင့်ဒီ အကြောင်း ကို ကျ နော် နဲ့သူ နဲ့ဘဲ သိ ကြ တယ်..။ကြာ တော့မ မ က ကျ နော့်ကို သိပ် မ ရှက် တော့ ဘူး ထင် ပါ ရဲ့ ...ကျော ခိုင်း ဖို့မ ပြော တော့ဘူး..။ ဒါ ပေ မဲ့ ပြောင် ကြီး..ကြည့်ပါ ဆို ပြီး လုပ် တာ တော့လဲ မ ဟုတ် ပြန် ဘူး..။ ကျ နော် က လဲ မ သ် မ သာ ခိုး ကြည့်တာပါ..။ မ မ သက် ရဲ့စောက် ဖုတ် ဖေါင်း ဖေါင်းကြီး .. နီ ညို ညို အ ကွဲ ကြောင်း ကြီး ကို တွေ့ရ တာ ကျနော့်ရဲ့ လီး ကို တ အား တောင် မတ် စေ တာ ပေါ့ ..။ ကျ နော် သေး ပေါက် တာ လဲ သူ ကြည့်မြဲကြည့်တယ်..။ဘာ လို့မှန်း မ သိ ဘူး..။ကျ နော် က လဲ အ ရင် က ထက် လီး ကို ကြာ ကြာ ကြီး ထုတ် ထား ပြီး မ မ မြင် အောင် ပြ မိ တယ်..။မ မ ကြည့်တာ ကိုကျေ နပ် တယ် လေ..။မ မ သက် ကျ နော့်လီး တန် ကြီး ကို သ ဘော ကျ ပုံ ရှိ တယ်..။ ဒါ ပေ မဲ့သူ့စိတ် ကို ချုပ် တီး ဟန် တူ တယ်..။လီး ကြီး ကို စိုက် ကြည့် ပြီး သက် ပြင်း ချ...တံ တွေး ဂု က နဲ မြို....တာ တွေ တွေ့ရ တယ်..။အိမ် သာ က မ ထွက် ခင် ကျ နော့်နား နား သူ့နှတ်ခမ်း လေး ကပ် ပြီး...တိုးတိုး လေး..“ကိုတိုး...မ မ နဲ့ခု လို အိမ် သာ အ တူ သွား တာ ဘယ် သူ့မှ မ ပြော ပြ နဲ့နော်..“ လို့ပြော ပါ တယ်...။ မ မ သက် နဲ့ကျ နော် အ ရင် က ထက် ပို ရင်း နှီး လာ ပါ တယ်..။နောက် တ ပတ် လောက် မှာ..မ မ သက် ထ မိန် ရင် လျား နဲ့ရေ2of93.
ချိုး ဖို့ရေ ချိုး ခန်း ထဲ ၀င် သွား တာ တွေ့လိုက် တာ ကြောင့် ...ကျ နော် လဲ မ မ သက် ရေ ချိုး တာ ကို ချောင်း ချင် တာ ကြောင့် ..ရေ ချိုး ခန်း ဘေး က စ တို ခန်းထဲ ၀င် လိုက် တယ်..။က မန်း က တန်း တ ဖက် ခန်း ကို ချောင်း ဖို့အ ပေါက် ရှာ မိ တယ်..။ အ ပေါက် လေး တ ခု တွေ့တယ်..။.မျက် လုံး ကပ် ပြီး အ ထဲ ကိုချောင်း ကြည့်တော့ ...ကောင်း ကောင်း သဲ သဲ ကွဲ ကွဲ မ မြင် ရ ဘူး...။ဒါ နဲ့အ ပေါက် ထပ် ရှာ ရ ပြန် တယ်..။ဒီ အ ချိန် မှာ ဘဲ...တ ဖက် ခန်း က ရေ သံ ကြားလိုက် ရ တယ်..။ အိ.....မ မ ရေ ချိုး နေ ပြီ...ထပ် တွေ့တဲ့အ ပေါက် က နေ မြင် လိုက် ရ တဲ့မြင် ကွင်း က ကြက် သီး တ ဖြန်း ဖြန်း ထ စေ သ လို ဖွား ဖက် တော် လီုးတန် ကြီး ဟာ လဲ တန်း က နဲ...မတ် မတ် တောင်သွား ရ တယ်..။ လှ လိုက် တာ...။ မ မ သက် ကိုယ် လုံး တီး အ လှ အ ပ ကို တွေ့ရ တာ ကျ နော့်တ ကိုယ် လုံးပူ ထူ ပြီး တောင် လွန်း နေ တဲ့လီး ကြီး ကို ကွင်း တ အား တိုက် နေ မိ တယ်..။ အ ရင် တွေ့ဖူး တဲ့မ ချို ထက် ပို လှ တာတွေ့ရ တယ်..။ မ မ ရဲ့ပေါင် တန် ရှည် တွေ ကြား က စောက် ဖုတ် ကြီး က ဖေါင်း ကြွ နေ တယ်..။အ ကွဲ ကြောင်း နီ ညို ညို ကြီး က လဲ ပြေး ယက် ချင် စ ရာ လှ လိုက်တာ..။မ မ ရဲ့နို့နှစ် လုံး က တင်း မာ ပြီး ကော့ကော့လေး နဲ့မ မ ဆပ် ပြာ တိုက် လှုပ် ရှား လိုက် ရင် တ ဆတ် ဆတ် တုံ သွား တယ်...။ မ မ သက် က ဖင် နှစ်လုံး ကြား..ကို လဲ ဆပ် ပြာ နဲ့ပွတ် နေ တယ်..။ မ မ ကို ကြည့်လို့မ ၀ စိုက် ကြည့်ရင်း လီး ကြီး ကို တ အား ကွင်း တိုက် နေ တုံး မ မ ရုတ် တ ရက် နေ တောင် မ သုတ် ဘဲ ထ မိန် ကို ဆွဲ ယူ ရင် လျားလိုက် တာ တွေ့လိုက် ရ တယ်..။ ဂျောက် က နဲ ရေ ချိုး ခန်း တ ခါး ဖွင့်သံ လဲ ကြား လိုက် ရ တယ်..။ ကျ နော် လဲ လီး ကြီး ကို ကွင်း တိုက် မြဲ တိုက် နေ မိ တယ်..။ဒီ တုံး ကျ နော် ၇ှိ နေ တဲ့စ တို ခန်း တံ ခါး ဖျတ် က နဲ ပွင့်သွား တယ်...။“ကို တိုး“..“ဟင်...မ မ သက်...“ “မ မ ကို ချောင်း နေ တာ လား...“ကျ နော် တုံ နေ တယ်..။ဘာ မှ ပြန် မ ဖြေ မိ ဘူး..။ စ တို ခန်း က မှောင် နေ တယ်..။ မ မ သက် ကျ နော့် လက် ကို ဆွဲ ပြီး တ ဖက် က ရေ ချိုး ခန်း ထဲ ကို ခေါ် သွား တယ်..။လီး ကြီး ကို ဆုတ် ကိုင် ရင်း မ မ နောက် က ပါ သွား ရ တယ်..။ မ မ က ရေ ချိုး ခန်း တံ ခါး ကိုချက် ထိုး ပိတ် ပြီး...ကျ နော့်ကို စိုက် ကြည့်ပြီး ..ကို တိုး..ဘာ ဖြစ် တာ လဲ...မ မ က ည ဖက် သေး သွား ပေါက် ရင် မ မ နဲ့ကို တိုးတ ယောက် နဲ့တ ယောက်...တွေ့ဘူး ပြီး ပြီ လို့သိ ထား တာ လေ...ဘာ လဲ...တ ကိုယ် လုံး မြင် ချင် လို့လား...ကဲ..ကြည့် ..ကြည့် ...ဆို ပြီး ရင် လျား ထား တဲ့ထ မိန် ကို ချွတ် ချ လိုက် ပါတယ်..။အိ...အ နီး ကပ် မြင် ရ တဲ့မ မ သက် အ လှ အ ပ တွေ က စော စော က မ မ သက် မိ သွား လို့ပြန် ကျ သွား တဲ့လီး ကို ချက် ချင်း ဒိုင်း က နဲ ပြန် မတ်ုတောင် သွား စေ တယ်....။ လီး ကြီး ဘောင်း ဘီ တို လေး ထဲ ကတောင် မတ် သွား တာ မ မ သက် လဲ တွေ့လိုက် တာ ပေါ့ ..။ “ကို တိုး လဲ ချွတ် လေ...“ ကျ နော် လဲ စွပ် ကျယ် ရော ဘောင်း ဘီ တို လေး ကို ရော ချွတ် ပစ် လိုက် တယ်..။ ဟ.. ကို တိုးဟာ က တော် တော် ဂှည် တာ ဘဲ ဟယ်... လုံးပတ် ကြီး က လဲ တုတ် လိုက် တာ.....မ မ က တ ဆတ် ဆတ် တောင် နေ တဲ့လီး ကြီး ကို ကြည့်ရင်း ပြော ပါ တယ်..။ နောက် ကို ကြည့်ချင် ရင် မ မ ကိုပြော..ဟုတ် လား.....မ မ နဲ့ကို တိုးနား လည် မှု..ပေါ့ ..ဘယ် သူ့မှ တော့ မ ပြော နဲ့ ...မ မ သက် ကိုယ် လုံး လှ လား ဟင်....ကျ နော် လဲ ခေါင်း ညှိမ့်ပြ မိတယ်..။ သက် သက် ရေ...သက် သက်.... ထ မင်း ချက် တဲ့အ ဒေါ် ကြီး အော်ေ ခါ် သံ ကြောင့် ....မ မ သက် ထ မိန် ကို ကောက် ယူ ရင် လျား လိုက် ပြီး အ မြန် ပြေး ထွက် သွား ရ တယ်..။ နောက် ၂ ရက် လောက် ကြာ တော့ ...။ ကျ နော် လဲ မိုး ရွာ ထဲ ဘော် လုံး ကန် လို့နေ မ ကောင်း ဖြစ် တာ ( တ ကယ် တော့ဖြစ် တာ က နဲ နဲ ပါ...ဖတ်ဘူး တဲ့နှာ စာ အုပ် တွေ ထဲ က လို ကြံ စည် ကြည့်တာ ပါ..။ ကျ နော့်အ မေ က ဆေး ခန်း ပြ ပြီး ပြန် အ လာ. ကျ နော် ချောင်း ဆိုး တာ ကြောင့်မ မ သက် ကိုကျ နော့်ကို ဂ ရု စိုက် ဖို့အ မြဲ ဆေး တိုက် ဖို့တာ ၀န် ပေး ပါ တယ်..။မ မ သက် လဲ ကျ နော့်အိပ် ခန်း ထဲ အ မြဲ လာ နေ ရ တယ်..။ ည ဖက် ရောက် တော့မသက် သာ ဘဲ ပို ဆိုး လာ တယ်..။ဒါ နဲ့ကျ နော့်အ မေ က မ မ သက် ကို “ ညီး မောင် လေး အ နား မှာ နေ ပြီး ပြု စု...သက် သက် “...ဆို လို့မ မ သက် လဲ ကျနော့်ကုတင် ဘေး မှာပက် လက် ကု လား ထိုင် နဲ့လာထိုင် စောင့်ပြီး လို တာ ပြု စု ပေး တာ..ကျ နော် လဲ နေ မ ကောင်း တာ ထက် မ မ သက် နဲ့အ တူ တူ တခန်း ထဲ နေ ရ တာ ကို သိပ် ရင် ခုံ မိ နေ ရ တာ ပေါ့ ...။ မ မ သက် က ဘ ရာ စီ ယာ အ ခု အ ခံ မ ပါ ဘဲ အင်း ချီ တ ထပ် ထဲ ၀တ် ထား တာ မို့ရင် သား အ စုံ လှုပ်ခါ တာ ကို မ မ သက် ကိုယ် လုံး လေး လှုပ် လိုက် တိုင်း တွေ့နေ ရ တာ သိပ်လှ တဲ့မြင် ကွင်း တ ခု ပါ..။ ည ဉ့်နက် လာ တဲ့အ ချိန် အ မေ ကျ နော့်အ ခန်း ထဲ လာ ပြီး မ မ သက် ကို ဒီ ည ကျ နော် နဲ့စောင့်အိပ် ဖို့ပြော ပါတယ်..။ မ မ သက် လဲ ကျ နော့်ကို ဆေး တိုက် ပါ တယ်..။ “ကို တိုး...မ မ ဘာ လုပ် ပေး ရ မ လဲ ဟင်....နှိပ် ပေး ရ မ လား....“ “အင်း..“ ကျ နော် က မှောက် ပေး လိုက် တော့မ မ သက် လဲ ကျ နော့်ကု တင် ပေါ် တက် ထိုင် ပြီး ဇက် ကျော ဆွ....တဲတောင် နဲ ခါး ကို ဖိ ထောင်း ပေး..ခြေ သ လုံး တွေ ကို နှိပ် ပေး ပါ တယ်..။ မ မ သက် ရဲ့ ဘ လောက်စ် အင်း ချီ ပါး ပါး အောက် က အ ခု အ ခံ မ ၀တ် ထား လိူ့သိသာ နေ တဲ့တင်း မာကော့ထောင် နေ တဲ့နို့နှစ် လုံး ဟာ မ ကြာ မ ကြာ ကျ နော့်ကျော နဲ့လက် မောင်း ကို ထိ ထိ နေ တာ ကျနော့်သွေး သား တွေ ကို ဆူကြွ လာ စေ ပါ တော့တယ်...။ မ မ သက် နှိပ် ပေး တာ ဇိမ် ကျ လွန်း လှ ပြီး ကျ နော် လဲ အိပ် ပျော် သွား ပါ တော့တယ်....။ ဖျတ် က နဲ နိုး လာ တော့မျက် နှာကျက် က မီး က မှောင် နေ တာ တွေ့ရ ပြီး.... ကျ နော့်ဘေး မှာ မ မ သက် လဲ ကပ် ကပ် လေး အိပ် ပျော် နေ တာ တွေ့လိုက် ရ ပါ တယ်..။ အိ... မ မ သက် ရဲု့ဘ လောက်စ် အင်း ချီ ရဲ့ရှေ့က နှိပ် ကြယ် သီး လေး တ ခု ကပွင့်နေ တယ်....မ မ သက် ရဲ နို့ဖြူ ဖြူ တ လုံးရဲ့နို့သီး ထိပ် ဖူး လေး ကို ပွင့်နေ တဲ့ဘလောက်စ် ကြား မှာ တွေ့လိုက် ရ တာ ကျ နော့်ရင် တွေ ပူ လောင် ဘ လောင် ဆူ လာ တယ်..။ကျ နော် ရဲ့ဖွား ဖက် တော် လီး တန် က ထောင်း က နဲ ထောင်ထ သွား တယ်..။ဟင်... မ မ ထ မိန် က လဲ ပြေ လို့ ....၀မ်း ပြင် သား ဖွေး ဖွေး လေး ပေါ် နေ တယ် ။ မ မ သက် တ ရှုး ရှုး နဲ့အိပ် ပျော် နေ တယ်..။ကျ နော် လဲ မ မသက် နဲ့သေး ပေါက် တုံး က မြင် ဖူး တဲ့မ မ သက် ရဲ့စောက် ဖုတ် ကို မြင် ယောင် မိ သွား ပြီး လီး က ပို ပြီး မာ ကျော လာ သ လို ဘဲ..။ ကာ မ စိတ် ရိုင်း ကြောင့်ကျ နော် မ မ သက် နား ကို ပို တိုး ကပ် အိပ် လိုက် ပြီး မ မ သက် ရဲ့ရင် ခွင် ထဲ ကိုခေါင်း တိုး ၀င် လိုက် တယ်..။ မ မ သက် နိုး လာ မ လား စောင့်ကြည့်တော့အိပ် မော ကျ ဆဲ ဘဲ..။ဒါ နဲ့အိပ် မက် ယောင် သ လို လို နဲ့မ မ ရဲ့နို့တွေ ကို မျက်နှာ နဲ့ ထိ နမ်း လိုက် တယ်.. ပ ထ မ..နှ ခေါင်း ဖျား နဲ့ပေါ့ ...။ဖွ ဖွ လေး နမ်း တာ..။.မ မ သက် မ နိုး ဘူး ဆို တာ သိ တော့နမ်း ရှု နေ တာ ကို တ ဆင့်တိုး ပြီး နို့ သီး ဖု လေး ကို နှုတ် ခမ်း နဲ့စို့လိုက် တယ်..။ကျ နော့်လက် က လဲ မ မ သက် ရဲ့ထ မိန် ပြေ နေ တဲ့အ ၀တ် မဲ့ဝမ်း ပြင် သား ရှပ် ရှပ် လေး ကို ကိုင် လိုက်တယ်..။ ဖွ ဖွ လေး ကိုင် တာ.....မ မ သက် နိုး ပုံ မ ပေါ် တာ မို့လက် က တ ဖြေး ဖြေး အောက် ဆင်း သွး ပြီး အ မွှေး နု နု လေ3းof94.
တွေ ကို ဆမ်း မိ လာ တယ်..။ “အင်း...ဟင်း....“ မ မ ညည်း သံ ထွကိ လာ တယ်..။ကျ နော် လဲ ငြိမ် နေ ပြန် ပြီး...မ မ ဆီ က ဘာ မှ မ ကြား မှ ဆက် ပြီး....နို့ထိပ်သီး လေး ကို စို့ပြန် တယ်..။ လက် က လဲ... ဆီး ခုံ ဖေါင်း ဖေါင်း ကြီး ကို စမ်း မိ ပြီ..။ အ သာ ပွတ် နေ မိ ပြီး အ ကွဲ ကြောင်း လေး ကို ပါ စမ်း မိ ပြန် တယ်..။နူး ညံ့ တဲ့မ မ သက် ရဲ့အ ကွဲ ကြောင်း လေး က စို ထိုင်း ထိုင်း လေး..“အင်း...ဟင်...“မ မ ဆီ က အ သံ ထွကိ လာ တယ်..။ မ မ ခြေ တ ဖက် ကကျ နော့် ပေါင် ကို လာခွ လိုက် တယ်....ထ မိန် က ကို ပြေ သွား ပြီး ဖင် သား ဖွေး ဖွေး တွေ ပါ ပေါ် ကုန် တယ်.။ကျ နော် လဲ မ နေ နိုင် တော့ ဘူး..။ကိုင် တော့တာ ဘဲ...။မမ ဖင် တွေ ကိုပွတ် နယ် မိ တယ်..။ နို့တွေ ကို လဲ စို့မိ တယ်..။မ မ က အိပ် ပျော် နေ ဆဲ....စောက် ဖုတ် ကို ကိုင် တဲ့လက် ကစောက် ဖုတ် နှုတ် ခမ်း သား တွေ ကို စမ်း နေ ရာက အ ရမ်း စို လာ တာ သ တိ ထား မိ လာ ပြီး....အ ကွဲ ကြောင်း ထဲ လက် ချောင်း လေး တ ချောင်း ထဲ့မိ ရ ပြီ..။ “ အင်း....ဟင်း ဟင်း.......“ မ မ ညည်း တယ်..။မမ ၇ဲ့နို့သီး ခေါင်း လေး က ကျ နော့်ရဲ့ ပါး စပ် ထဲ မှာ....မမ စောက် ဖုတ် ကို ကောင်းကောင်း က လိ နေ မိ ရ တယ်..။မမ ရဲ့ဖင် ကို လဲ ပွတ် နယ်....ကိုင် တွယ် မိ တယ်..။မ မ ရဲ့ဖင် နှစ် လုံး ကို တ လုံး ချင်း နယ် ဆုတ် နေ ပြီး ဖင် နှစ် လုံး ကြား ကိုလဲ စုံ ချီ ဆန် ချီ လက် ညှိုး နဲ့ပွတ် ပြီး စ အို ၀ လေး ကို ပါ က လီ ပေ လိုက် ပါ တယ်..။ “ဟင်း....အင်......အင်း...အိ.....ကို တိုး..“.မ မ တိုးတိုး လေး ညည်ုးတယ်..။ကျ နော့်ကိုယ် တွေ ကို လိုက် စမ်း ကြည့်နေ တယ်..။မ မ နိုး လာ ပြီ..။ မ မ နိုး နေ ပြီ..။ စိတ် များ ဆိုး မ လား....မ မ က ကိုင် နေ တဲ့ကျ နော့်လက် တွေ ကို မ ဖယ် ပစ်....ဟင်....မ မ ပြုံး နေ ပါ လား...ဘာ တွေ လုပ် နေ တာ လဲ....ကွယ်....တိုး တိုး လေး ပြော တယ်..။ ဟင်း မ မ ရယ်.....ချစ် တယ်...ကျ နော် ပြော ရင်း မ မ ကို ဆက် ကိုင် နေ တယ်..။မ မ.. မ ငြင်း တာ မို့ကျ နော် လဲ ပို အ တင့်ရဲ သွား ရပြီး....မ မ ဘ လောက်စ် ကြယ် သီး တွေ ကို အား လုံး ဖွင့်ဖြုတ် လိုက် တယ်...။ နှိပ် ကြယ် သီး တွေ ...တ ထောက် ထောက် နဲ့အား လုံး ပြုတ် သွား ပြီး မ မ နို့ တင်းတင်း ကော့ကော့၂ လုံး အ ကာ အ ကွယ် မ ရှိ တော ..။ု့ .....အိ........ နို့တ လုံး ကို စို့ပေး လိုက် တယ်..။မ မ ပါးစပ် လေး ဟ သွား တယ်...။အ.....အာ.....အင်.......တိုး...တိုး.....ကဲ လိုက် တာကွယ်..........။မ မ စောက် ဖုတ် ထဲ လက် ချောင်း က ၀င် လိုက် ထွက် လိုက် နဲ့ ....ဒီ တုံး မှာ မ မ သက် လက် က လေး က ကျ နော့်လီး တန် ဆီ ကို ရောက် လာတယ်.။ “လီး တန် ရဲ့ ထိပ် ဒစ် ကို လက် ချောင်း လေးတွေ နဲ့မ ရဲ တ ရဲ ပွတ် သပ် လာ တယ်...။ “တိုး.......“.ဟင် ...မ မ.“......“.ချစ် လား ဟင်...“..“ချစ် တယ်...မ.မ.ရယ်.....အ ရမ်း.....ချစ် တာ...“ လီး ကို ဖွ ဖွ လေး ဆုတ် ကိုင် လာ တယ်...။ “ မာ တောင် နေ တာ ဘဲ ကွယ်.....ဟင်း.....“မ မ သက် လီး ကို အ ထူး အ ဆန်း တ ခု လိုကိုင် ကြည့် ပါ တယ်...။ “ မ မ ....လေ...သူ့ဟာ ကို ကိုင် ချင် နေ တာ ကြာပါ ပြီ ကွယ်...ဟင်း ကြီး လိုက် တဲ့ဟာ ကြီး ကွယ်..........ကျ နော် လဲ မ မ ရဲ့တင်း မာကော့ထောင် နေ တဲ့ အ ပျို စင် နို့နှစ် လုံး ကို တ ဖက် ပြီး တ ဖက် စို့ ...လျှာ နဲ့လျက်...လက် က လဲ စောက် ဖုတ် ကို က လိ....မ မ လဲ တ ဟင်း ဟင်း နဲ့ ကျ နော့် လီး ကို ဆုတ် ကိုင် ဖျစ် ညှစ် တယ်..။ကျ နော့်ရဲ့ဂွေး စိ တွေ ကို လဲ ပွတ် သပ် နေ တယ်..။ နှာ စာ အုပ် ထဲ က လို စမ်း ချင် တာ နဲ့မ မ ပြေ နေ တဲ့ထ မိန် ကိုချွတ် လိုက် ပြီး မ မ ပေါင် ကြား ထဲ ခေါင်း စိုက် ၀င် လိုက် ပါ တယ်..။ “ မ မ သက် .....နမ်း ချင် တယ်...ကြိုက် တယ်....ချစ်တယ် ဗျာ..“.။ “ ဟင့် .....ဘာ...ဘာ... လုပ် ..မှာ လဲ .....ကို တိုး......အိ......မမ ဟာ ကို ယက် မ လို့လား.......“ုကျနော် က ဘာ မှ ပြန် မ ဖြေ..။မ မ ရဲ့ စောက် ဖုတ် အုံ ကြီး တ ခု လုံး ကို နမ်း နေ မိ ပြီး ...စောက် ရေ တွေ စို နေ တဲ့..အ ကွဲကြောင်း ပန်း နု ရောင် လေး ကို လျာ နဲ့စ ပြီး ယက် ပြီ....။မ မ သက် မျက် စိ တွေ မှေး စင်း သွား တယ်..။နှုတ် ခမ်း လှ လှ လေး ဖျတ် က နဲ ပွင့်လာ တယ်......။ “အို ကွယ်...ကို တိုးရယ်.........“ ကျ နော့်လျာ က မ မ သက် ရဲ့စောက် ဖုတ် နုတ် ခမ်း နှစ် လွှာ ကြား တိုး ၀င်ပြီး အ ထက် အောက် စုံ ချီ ဆန် ချီ ...လျက် ပေး နေတယ်....။လက် နှစ် ဖက် က မမ သက် နို့နှစ် လုံး ကို တင်း တင်း လေး နယ် ပေး နေ မိ တယ်..။ “ အိ......အင်....အင်....အား...အာ...“ု.မ မ ဟာ ခွေး ငယ် လေး တ ကောင် ညည်း တဲ့အ သံ လို..ညည်း နေ ပြီး ကျနော် ရဲ့ခေါင်း ကို သူ့လက် တွေ နဲ့ ကို ဆုတ် ထား ပါတော့တယ်.....။ အ ကို ၀မ်း ကွဲ မောင် မောင် စိုး သင် ကြား ပေး တာ တွေ နဲ့လိုး ဖူး တဲ့မ ချို ပြ သ ပေး တာ တွေ... ပြန် မြင် ယောင် ကြား ယောင်ပြီး လက် တွေ့အ သုံး ချ နေ မိ ပြီ...။ မ မ သက် က တိုး တိုး လေး...“ကို တိုး...ငယ် ငယ် လေး နဲ့သိပ် တတ် နေ တာ ဘဲ ကွယ်....“လို့ပြော ပါ တယ်...။ ကျ နော် က စ ကား နဲ့ဘာ မှ မ တုံ့ပြန် ပါ ဘူး..။ မ မ သက် စောက် ဖုတ် ကို ကောင်း ကောင်း လျက် ပေး နေ တာ..မ မ သက် မှာ ကာမ အ ရ သာ ကြောင့့် ကျနော့်လျာ ယက် လိုက် တိုင်း သူ့ ဖင် ကို ကော့ ကော့ ပြီး နုတ် ခမ်း လေး ဟ ပြီး..အင်း အင်း ..ဟင်း ဟင်း နဲ့ကောင်း နေ ပုံ ပါ..။ မ မ သက် စောက် စိ ကို ဖွဖွ လေး နမ်း ပေး နေ ပါ တယ်..မ မ သက် လဲ မ ကြာ ခင် မှာ ဘဲ...“အားအား.....အိ...အိ...တိုး...တိုး.....ကောင်း............................. ကောင်း...ကောင်း.......အီး အီး.......“.ဆို ပြီး..တ ကိုယ် လုံး တုံ ခါ တွန့်သွား ပြီး......ကာ မ အ ထွတ် အုထိပ် ကို ရောက်( ပြီး) သွား ပါ တော့တယ်..။ ကျ နော် ရဲ့ကာမ စိတ် ဟာ လဲ အ ပြင်း ထန် ဆုံး အ ချိန် ရောက် နေ တာ ကြောင်... မ မ သက် ရဲ့အ ၀တ် မဲ့အ လှ အ ပ တွေ ကို အ နီး ကပ် ကြည့် ပြီး.. လီး ကို တ အား....ကွင်း တိုက်လိုက် တာ နဲ့သုတ် ရေ တွေ မ မ သက် ဘိုက် ပေါ် ကို ပန်း ထွက် ကုန် ပြီး အ လွန် ကောင်း တဲ့ကာ မ အ ရ သာ ကို ရ ရှိလိုက် ပါ တယ်....။ မ မ သက် လဲ အ ချိန် အ တန် ကြာ ငြိမ် နေ ရာ က ထ မိန် ကို ကောက် ၀တ် လိုက် ပြီး ခြေ ရင်း က စောင် ပါး လေး ကို ဆွဲယူ ခြုံ ပါ တယ်..။ကျ နော် လဲ မ မ သက် န ဘေး ၀င် လှဲ အိပ် ..သူ့စောင် ထဲ ၀င် လိုက် တယ်...။မ မ သက် ကို ဖက် ထား လိုက် တယ်..။ ” မ မ...“4of95.
“ဟင်...“ “ကောင်း လား...“ “ဘာ ကို မေး တာ လဲ.....“ “ကျနော် နမ်း တာ ကောင်း လား လို့ ...“မ မ သက် က ခေါင်း လေး ငြိမ့်ပြ ပါ တယ်...။ ပြီး တော့ ..“ကို တိုး..လယ် လိုက် တာ..ဒါ တွေ ဘယ် လို တတ် နေ တာ လဲ....“ လို့တိုး တိုး လေ သံ လေး နဲ့ပြောပါ တယ်..။ကျ နော် လဲ ပြန် မ ဖြေ ပါ ဘူး..။မ မ ရဲ့ခါး လေး ကို ဖက် ထား ပြီး မ မ လည် တိုင် ဖွေးဖွေး ကို နမ်း နေ လိုက် ပါ တယ်...။“ကို တိုး.....လူ ကြီး တွေ သိရင် မိုးမီး လောင် မှာ....မ မ သက် အိမ် ပေါ် က ခေါင်း နဲ့ဆင်း ရ လိမ့်မယ်...“ “ဘယ် လို မှ မ သိ နိုင် ပါ ဘူး..မ မ ရယ်....“ “ လူ ရှေ့ ဆို မ မ နဲ့ပုံ မှန် ဘဲ ဆက်ဆံ နော်...“ “အင်း ပါ...“ ကျ နော် လဲ မ မ သက် ရဲ့စ ကား များ နေ တဲ့နှုတ် ခမ်း လေး ကို အ နမ်း နဲ့ပိတ် လိုက် တယ်...။ လူ ပျို လက် ၀က် မြီး...ဆို သ လို လူ ပျို ပေါက် လေး ကျနော် ရဲ့လက် တွေ က မ မ သက် ရဲ့ ပေါင် တန် ရှည် ၂ ချောင်း ကို ပွတ် သပ် နေ ပါ ပြီ...မမ သက် ရဲ့ နှုတ် ခမ်း တွေ ကို စုတ် နမ်းနေ ရင်း ကျနော့် လျာ က မ မ သက် လျာ လေး ကို က လိ နေ ပါ တယ်..။မ မ သက် လက် တွေ က လဲ ကိုယ် လုံး တီး ဖြစ်နေ တဲ့ကျနော့်ကိုယ် နေ ရာ အ နှံ့ ကို ပွတ် သပ် ပေး နေ ရင်း ကျနော့် ကို တုံ့ပြန် နမ်း စုတ် ပါ တယ်..။ ကျနော့် လီး က အ စွမ်း ကုန် ပြန် တောင် မတ် နေ ပြီ ဖြစ်တယ်...။ကျ နော် ရဲ့လက် ချောင်းတွေ က မမ သက် ရဲ့ စောက် ဖုတ် ကို ကိုင် တဲ့အ ခါစောက် ရေ တွေ စို နေတာ ကို သိ လိုက် ရ တာ မို့မ မ သက် လဲ ရာ ဂ စိတ် တွေ ထ ကြွ နေ ပြီ ဆို တာ သေ ချာ ပါ တယ်..။ ဒါ ကြောင့် ..ကျ နော် လဲ မ မ သက်ကို..“မ မ ...ကျနော့်ကို နမ်း ပေး မ လား ဟင်...“ လို့ မေး လိုက် ပါ တယ်.။ “ခု မ မ သက်...ကို တိုး ကို နမ်း......ပြန် နမ်း နေ တာ ဘဲ မ ဟုတ် ဘူး လား..။““ဟင့် အင်း...ဒီ လို နမ်း တာ မ ဟုတ် ဘူး....ကျ နော့်လီး ကြီး ကို နမ်း ဖို့ပြော တာ...မ မ နမ်း ပေး မယ် မ ဟုတ် လား ဟင်...“ “အိ....ကို တိုး က လဲ ကွယ်...မ မ သက် တုခါ မှ နမ်း ဘူး တာ မ ဟုတ် ဘူး.“ “ကျ နော် သင် ပေး မယ်...မ မ သက်....“ကျနော် က မ မ လက် ညှိုး လေး ကို ဆွဲ ယူ ပြီး ပါး စပ် နဲ့ငုံ စုတ် ပြ လိုက် တယ်.....လျာ နဲ့လဲ က လိ ပြလိုက် ပါ တယ်...။“မမ...အဲ လို ကျနော့်လီး ကို ငုံ ပြီး စုတ် ပေး နော်....“ မ မ သက် ကခေါင်း ငြှိမ့်ပြ ပါ တယ်..။ကျနော် လဲ စိတ် ထဲ မှာ ထိတ် က နဲ ၀မ်း သာ သွားရ တယ်..မ မ ကျ နော့်လီး ကို စုတ် တော့မယ် လေ...။ကျ နော် လဲ မ မ နှုတ် ခမ်း လှ လှ လေး ဆီ လီး ကြီး ကို ကပ် ပေး လိုက် တယ်...။မ မ လဲငုံ ပြီး စ စုတ် ပါပြီ...မ မ သက် က လီး တန် ကြီး ကို ရေ ခဲ ချောင်း စုတ် သ လို တ ပြွတ် ပြွတ် စုတ် ပေး နေ တယ်..။ ကျနော် က သူ့လက် ချောင်း လေး ကို ဆွဲ ယူ ပြီး ကျ နော့်ပါးစပ် ထဲ ထဲ့ ..ရှေ့တိုး နောက် ငင် လုပ် ပြ ရ ပြန် တယ်..။မ မ သက် လဲပြ ပေး တဲ့အ တိုင်း အား ရ ပါး ရ စုတ် ပေး နေ ပါ တယ်..။ “ အား...အင်း...ကောင်း လိုက် တာ......အင်....မ မ ..ရယ်......“ မ မ သက် လဲ မှို ပွင့် ကြီး လိူ ကား နေ တဲ့ဒစ် ကြီး ကို လျာ လေး နဲ့ လျက် ပေး လိုက်...တွဲ လောင်း ကျ နေ တဲ့ကျနော့်ရဲ့ဂွေး စိ နှစ် လုံး ကို လျက် ပေးလိုက်..လုပ် ပေး ပါ တယ်...။ပြီး တော့လီး တန် တ ဆုံး ငုံ ထား လိုက် ပြီး လျာ လေး နဲ့လီး ကြီး ကိုပွတ် လှိမ့် ပေး တာ ကျ နော် လဲ အ ရ သာ ရှိ လွန်း လို့တဟင်း ဟင်း ညည်း ငြူ နေ ရ ပါ တယ်..။ ကျ နော် လဲ မ မ သက် စုတ် ပေး နေ တုံး မ မ သက် ရဲ့နို့တင်း တင်း လှ လှလေး နှစ် လုံး ကို ညင် ညင် သာ သာ လေးပွတ် သပ် အ ရ သာ ခံ နေ မိ ပါ တယ်..။ မ မ သက် ရဲ့အ စုတ် ကောင်း လွန်း လို့ကျ နေိာ လဲ “ပြီး“ ကာ နီး ဖြစ် လာ ရ တာ မို့မ မ သက် နှုတ် ခမ်း ထဲ က ကျနော့်လီး ကြီး ကို ထုတ် လိုက် ပါ တယ်.။ “ ကောင်း လား ဟင်...ကို တိုး..“ “သိပ် ကောင်း တာ ဘဲ..မ မ “ ကျ နော် လဲ မ မ သက် ပေါင် တန် တွေ ကြား က အ မွှေး ရေးေ၇း နဲ့စောက် ဖုတ် ကြီး ကို ငုံ့ပြီး နမ်း လိုက် ပါ တယ်...။ “အိ“....မမ သက် စောက် ဖုတ် မှာ အုရေ တွေ စို နေ တာ တွေ့ရ တယ်..။ အ ကွဲ ကြောင်း ကြီး တ လျောက် ကို လျာ နဲ့ အ ပေါ် က အောက် ဖွ ဖွ လေး ယက် လိုက် တယ်..။အင်....မ မ သက် တွန့်သွားတယ်..။ဖျတ် က နဲ...အ ရ သာ ဖူး စောက် စိ လေး ကို ဖမ်း ငုံ ပြီး လျာ ဖျား လေး နဲ့လျက် ပေး လိုက်...အ သာ လေး စုတ် ပေး လိုက်..လုပ် ပေး တော့ ..မ မ သက်လူး ခါ နေ တယ်...။ မ မ သက် ရဲ့စောက် ဖုတ် ကို စုံ ချီ ဆန် ချီ လျာ နဲ့ယက် ပေး နေ ရာ က စောက် ဖုတ် နှုတ် ခမ်း သား တွေ ကို လက် မ နဲ့လက် ညှိုး သုံး ပြီးဖြဲ...အ ထဲ ကို လျာထိုး ထဲ့ပြီး မွှေ ပေး တယ်..။“ အာ...အင်....ဟင့် ...ဟင့် .......အင့် .....“မ မ သက် ကျ နော့်ဆံ ပင် တွေ ကို တ အား ဆွဲ ဆုတ် ကိုင် ပြီး... ဖင် တွေကို...ကော့ကော့ပေး နေ ပြီ...။မ မ ရဲ့ဖင် ၂ လုံး ကို ဆုတ် ကိုင် ပြီး..စောက် ဖုတ် ကို အ ရမ်း ယက် နေ မိ ပါ တယ်..။ မ မ သက် အ ရမ်း ကောင်း နြေ့ပီ.......“ကို...ကို တိုး....... မ မ .. မမ....အ နေ ရ ခက် ..နေ ပြီ......ကွယ်... မ မ လို ချင် နေ ပြီ.....“မ မ သက် အ သံ တုံ တုံ လေး နဲ့ပြော တယ်..။“ မ မ အ ရမ်း ယားနေ လား ဟင်...“ မ မ သက် က မ ဖြေ....“ဖြေ လေ..မ မ ယား နေ လား....““အင်း အင်း...“ပါး စပ် က ဖြေ..““အင်း ပါ...ယား လှ ပြီ.....ပေး ပါ တော့ ....“ “ဘာ ကို ပေး ရ မှာ လဲ....““အို ကွယ်...““ပြော...ဘာ ပေး ရ မှာ လဲ...““အိ....ခက် တော့တာ ဘဲ...လီး......လီး ကြီး....မင်း လီး ကြီး က်ု ..ပေး ပါ တော့ ...“ုကျ နော် လဲ မ မ သက် စောက် ဖုတ် နတ် ခမ်း သား တ လျောက် ကို ဒစ် ဖျား နဲ့ အ ပေါ် အောက် ဆွဲ ပွတ် တယ်..မ မ သက် တ ဟင်း ဟင်း နဲ့လူးနေ တယ်...။ “ထဲ.့...ထဲ့ ....ပါ တော့ ..“မ မ သက် စောက် ဖုတ် က အ ရေ တွေ ရွှဲ နေ တာ အ ရမ်း ပါ..ဒါ ကြောင့်ကျ နော် လဲ လီး ကို မ မ စောက် ဖုတ် နှုတ် ခမ်းလွှာ ကြား ကို အ သာထိုး လိုက် ပါ တယ်..။တင်း တင်း ကျပ် ကျပိ လေး ဒစ် လုံး ကြီးတိုး ၀င် သွားတယ်..ကျ နော် လဲရှေ့တိုး နောက် ငင် ဖြေး ဖြေး ချင်း ဒစ် ကို အသွင်း အ ထုတ် ..လုပ် ပေး တာ.. မ မ သက် လဲ တ အင်း အင်း နဲ့ပါး စပ် လေး ဖွင့်ဟ ပြီး..ဖီ လင် တွေ တက် နေ ပါ တယ်..။ “ နာ...နာ တယ်..ဖြေးဖြေး.....အိ....“...ကျ နော် လဲတ ထစ် ချင်း...ဖြေး ဖြေး လေး ထိုး ထဲ့လိူး ပါ တယ်...။တော် တော် လေး အို ကေ လာ မှ ဖြေး ဖြေး လေး ချော့ပြီး ထိုး သွင်း ပြီး လိူုးကြည့်တယ်..။ တော် တော် လေး လိုး ပြီး....“မ မ နာ သေး လား...“ “ရ တယ်...လုပ်..လုပ်..“မ မ သက် စောက် ဖုတ် က တင်း ကျပ် ပြီး ...သိပ် ကောင်း တာ မို့တဖြေး ဖြေး နဲ့ လိုး ချက် က မြန် လာ တယ်...။ “ မ မ ... အို ကေ လား ဟင်...“5of96.
“အင်း.....အင်း....“ “ ကောင်း လား...“ “ကောင်း တယ်...သိပ် ကောင်း....“ပါး စပ် က မေး နေ တုံး ကျ နော် လီး က လဲမှန် မှန် လေး လိုး နေ တယ် ..။ တ ချက် လိုး လိုက် တိုင်း တင်း က နဲ အ ရ သာ က ကောင်း လှ တယ်..။ စီး စီး ပိုင် ပိုင်လိုး ရ တာ အ ရမ်း ကောင်း လွန်း နေ တာ မို့မ မ သက် နို့နှစ် လုံး ကို ဆုတိ ကိုင် ပြီး ဖင် ကော့ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်..။ အင်.အင်.....ကောင်း...ကောင်း........ကောင်း တယ်....ကို တိုး ရယ်......မမ သက်..ဖင် ကို ကော့ကော့ပေး တယ်..။ မ မ သက်..မ ရှက် တော့ ...။“ဆောင့်ဆောင့်....ဆောင့်ပေး ဆောင့်ပေး....လို့တောင်း ဆို ပါ တယ်..။ ကျ နော် မ မ သက် စောက် ဖုတ် ကို အ ရမ်း သ ဘော ကျ သွား တာ ဘဲ...။ဒါ ကြောင့်တ အား ဘဲဆောင့်ဆောင့်လိုး ပါ တော့တယ်....။ မ မ သက် ခြေ ထောက် ကို ပ ခုံး ပေါ် တင်..ဖင် တွေ ကိုဆွဲကိုင် ပြီး..ကော့ကော့လိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်...။.မ မ သက်က ကျ နော့်ကျော ကို တ အား ဖက် ထား ပြီး အ ချက် ၃၀ လောက် ဆောင့်အ ပြီး....တ အီး အီး ညည်း ရင်း “ပြီး ခြင်း“ ကို ရောက် ရှိ သွား ပါ တော့တယ်..။ကျနော် လဲ ဆက် တိုက်ထပ် လိုး ဆောင့် တာ မ ကြာခင် မှာ ဘဲ မ မ သက် စောက် ဖုတ် ထဲ သုတ် ရေ တွေ ပန်း ထုတ် ပြီး.. ပြီး သွား ရ ပါ တယ်...။ နောက် တ နေ့ ...လူ အ လစ် မ မ သက် ကို စ တို ခန်း လေး ထဲ ဆွဲ သွင်း ပြီး..ခါး သိမ် လေး က နေ ဆွဲ ဖက်....နှုတ် ခမ်း စု စု လေးကို ဖိ ကပ် စုတ် လိုက် တယ်..။ “ချစ် တယ်...မ မ ရယ်....““မ မ ရော ဘဲ...“မ မ သက် က တုံ တုံ ရီ ရီ နဲ့ပြန် ပြော ပြီး ကျနော့်ကို ပြန် ဖက် ထား တယ်..။ “ည က ကောင်း လား ဟင် မ မ သက်...“မ မ ရဲ့ဖင် ၂ လုံး ကို ဆုတ် နယ် ရင်း မေးတော့မ မ က ခေါင်း ငြှိမ့်အ ဖြေ ပေး ပါ တယ်..။ကျ နော့်လီး က အ စွမ်း ကုန် တောင် မတ် နေ ပြီ....။ မ မ သက် လက် ကို ဆွဲ ယူ ပြီး လီး တန် ကြီး ထဲ့ပေး ပြီးကိုင် ခိုင်း တာ မ မ သက် လဲ ဖွ ဖွ လေး ပွတ် သပ် ပေး ပါ တယ်...။ အဲ ဒီ အ ချိန် မှာ ရုတ် တ ရက် စ တို ခန်း ဖက် ကို လျှောက် လာ တဲ့ခြေ သံ ကြား လိုက် ရ လို့မမ သက် နဲ့ကျ နော် အ သာ ငြိမ် နေ လိုက် ကြ တယ်..။ မ မ သက် ရဲ့ညီ မ မေ အေး လွင် ပါ..။ မ မ သက် ရဲ့နာ မယ် ကို ခေါ် ရင်း လိုက် ရှာ နေ တာ မို့မ မ သက် လဲ “ နောက် မှ...နော်“ လို့တိုးတိုး ပြော ပြီး ပြေးထွက် သွား ပါ တော့တယ်..။ ကျ နော် ဘဲ တ ယောက် ထဲ လီး ကြီး တောင် မတ် ပြီး ကျန် နေ ခဲ့တာ ပေါ့ ...။ တ နေ့လုံး လူ မ လစ် တော့တာ မို့မ မ သက် နဲ့ကျ နော် မ တွေ့ဖြစ် ဘူး..။ ည နေ စောင်း ရောက် တော့ကျ နော် သူ ငယ် ချင်း အိမ် က ပြန် လာတော့မ မ သက် ကို မ တွေ့ဘူး.....မေ အေး လွင် ကို မေး ကြည့်တော့မ မ သက် နဲ့ကျ နော့်အ မေ .....မော် လ မြိုင် က မ မ သက် ရဲ့အ မေ..ဆေး ရုံ တက် ရလို့အ ရေး တ ကြီး လိုက် သွား တယ် လို့သိ ရ တယ်..။ မေ အေး လွင် က တော့ကျောင်း မ ပျက် ချင် လို့ ...သူ တို့အ မေ က လဲ သိပ် စိတ် ပူ စ ရာ မ လို လို့ လိုက် မ သွား ဘူး လို့ ပြော တယ်..။ ည ဖက် ရောက် တော့မ မ သက် နဲ့ဖြစ် ပျက် ခဲ့တာ တွေ မြင် ယောင် သ တိ ရ ပြီး လီး ကြီး တ အား တောင် ပြီး အိပ် လို့မ ရ ဘူး..။ သုံး ရက် ကြာ တော့ကျ နော့်အ မေ မော် လ မြိုင် က ပြန် လာ တယ်..။ မ မ သက် တော့ပြန် လိုက် မ လာ သေးဘူး..။ကျ နော် စိတ် ညစ် သွား တယ်..။ နေ့လည် ဖက် မှာ ကျ နော် ကျောင်း က ပြန် ရောက် တော့အိမ် မှာ ဘယ် သူ မှ မ ရှိ ကြ..။ထ မင်း ချက် တဲ့အ ဒေါ် ကြီးက တော့ထုံး စံ အ တိုင်း အ လုပ် လူပ် စ ရာ မ ရှိ လို့သူ့အ ခန်း လေး ထဲ မှာ အိပ် နေ မယ် ထင် တာ ဘဲ..။မီး ဖို ထဲ မှာ မ တွေ့ဘူး...။ကျ နော် လဲ အ ဝေး ထိန်းခ လုပ် နဲ့မောင်း ရ တဲ့က စား စ ရာ ကား လေး မှာ ဘက် ထ ရီ ကုန် နေ တာ အ သစ် လဲ တယ်..။အိမ် အ ပေါ် ထပ် မှာ ပေါ့ ..။ “ အပေါ် ထပ် ကို ရေ မ တက် ဘူး..အောက် ဆင်း ချိုး ရ မယ်..“ မေ အေး လွင် အ သံ ကို ကျော ဖက် က ကြား လိုက် ရ တယ်..။အ မှတ် တ မဲ့လှည့် ကြည့်လိုက် မိ တယ်..။အား ပါး....သ တိ မ ထား မိ တာ ကြာ ပြီ....မေ အေး လွင်..ထ မိန် ရင် လျား နဲ့သူ့အ ခန်း က ထွက် လာ တယ်..။ ထ မိန် က ဟောင်း နွမ်းလွန်း တယ်..။ဖြူ ၀င်း တဲ့မေ အေး လွင် ရဲ့နို့တွေ က ရင် လျား ထား တဲ့ထ မိန် အ ပေါ် က လျံ ထွက် နေ ပြီး ခါး သေး သေး အောက် က ၀ိုင်း ကား တဲ့ဖင် ကြီးတွေ က လဲ လမ်း လျှောက် လိုက် တိုင်း ခါ နေ တယ်..။ “မော် တာ ပျက် နေ တာ..ကိူ မောင် မောင် စိုး ပြင် တဲ့လူ သွား ခေါ် နေ တယ်..“မေ အေး လွင် ကျ နော့် ဘေး က ဖြတ် လျှောက် သွား ရင်း ပြော ပါ တယ်..။ ဒါ ပေ မဲ့မေ အေး လွင် ပြုံး စိ စိ နဲ့ကျ နော့်ကို စ တဲ့အ နေ နဲ့ဖျတ် က နဲ ဆွဲ ဆိတ် လိုက် ပါ တယ်..။ ကျ နော် လဲ က စားစ ရာ ကား လေး ထဲ ဘက်ထ ရီ ထဲ့ေ န ချိန် မို့ရုတ် တ ရက် ဘာ မှ မ တုံ့ပြန် နိူင် ဘူး..။မေ အေး လွင် က တ ခစ် ခစ် ရီ ပြီး လှေ ခါး က နေ ဆင်း ပြေး တယ်..။ဖင် ကြီး တွေ ကရမ်း ခါ နေတာ တွေ့လိုက် ရ တယ်..။ “ သိ ကြ ရော ပေါ့ ..“ကျ နော် လဲ လှေ ခါး က ပြေး ဆင်း ပြီး မေ အေး လွင် နောက် ကို လိုက် တယ်..။မေ အေး လွင် က ရီ ပြီး....အောက်ထပ် က ရေ ချိုး ခန်း လေး ထဲ ၀င် ပြေး သွား ပါ တယ်..။ ဒီ အ ချိန် မှာ ဘဲ လှေ ခါး အောက် ဆုံး နံ ရံ မှာ ရှိ နေ တဲ့တယ် လီ ဖုံး က မြည် လာ တာ ကြောင့်ကျ နော်လဲ ကိုင် လိုက် ရ တယ်..။ ကျ နော့်အ မေ ကို ပြော ချင် တဲ့ဖုံး ပါ..။မ ရှိ ကြောင်း ပြော ပြီး ဖုံး ပြန် ချ တင် ပြီး မှ မေ အေး လွင် ဆီ ပြေး လိုက် တော့ရေ ချိုး ခန်း ထဲဝင် သွား ပြီး နေ ပြီ လေ..။ရေ ချိုး ခန်း တံ ခါး ကို ဆွဲ ဖွင့်လိုက် ပါ တယ်..။ ငါ့ကို ဆိတ် သွား တဲ့လူ...တွေ့ကြေ၇ာ ပေါ့ ..“ ဟာ......တံ ခါး က ဂျက် ထိုး ထား ပုံ ရပေ မဲ့ဂျက် က က ရော် က မယ် နဲ့ ..ကျ နော် ဆွဲ ဖွင့်လိုက် တော့ပွင့်ထွက် သွား တယ်...။ အို ....ကို တိုး.......မေ အေး လွင်....ကို အ ၀တ် မ ပါ ဘဲ တုံး လုံး ကြီး တွေ့လိုက် ရ ပါ တယ်...။ သူ မ ထ မိန် နွမ်း လေး က တန်း ပေါ် မှာ လှမ်း ထား ပြီး ဖြစ် နေ တယ်..။ဖြူ ၀င်း တဲ့နို့ ကြီး တွေ ကတင်း မာ ကြီး အောက် ကို တွဲ မ ကျ သေး..ကော့ကော့ကြီး တွေ ပါ....မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် မို့ပေါင် တန် ဖြူ ဖြူ တွေ နဲ့ဆီး ခုံ မို့မို့ဖေါင်း ဖေါင်း ကြီးကို လဲ တပ် မက် ဖွယ် တွေ့လိုက် ရ တယ်..။အ မွှေး နု နု လေး တွေ ခပ် ပါး ပါး ၇ှိ နေ တဲ့မေ အေး လွင့်စောက် ပတ် ကြီး ကို မျက် လုံး မ ခွါ နိုင် အောင် ဘဲ..။ မေ အေး လွင် က လက် ၂ ဖက် နဲ့နို့တွေ ကို ကာ လိုက် တယ်..။ပြီး မှ အောက် ဖက် ကို သ တိ ရ သွား ပြီး စောက် ပတ် ကို လက် ၀ါး တ ဖက် နဲ့ကာ ပြန်တယ်..။ “ကို တိုး.....ထွက်..ထွက်...သွား ပါ..“ထ မိန် ကို သ တိ ရ သွား ပြီး လှည့်ပြီး ဆွဲ ယူ တယ်..။ကျော ခိုင်း လိုက် တော့ဖင် ကား ကား ကြီး တွေ ကို လှည့်ပြလိုက် သ လို ဖြစ် သွား တယ်..။ဖင် ကြီး နှစ် လုံး က လုံး ထစ် ဖု ထွက် နေ တယ်..။ ကျ နေိာ လဲ မေ အေး လွင် ထ မိန် ကို ခေါင်း ပေါ် က စွပ် နေ တုံး သူ မ ရဲ့ဖင်တ လုံး ကို ဆွဲ ဆိတ် လိုက် ပါ တယ်..။ အို့ ...ဘာ လုပ် တာ လဲ..။ “ပြန် ဆိတ် တာ လေ...““အိုး..ကို တိုး မ ကောင်း ဘူး..“မေ အေး လွင် ထ မိန် ကို ရင် လျား ရင်းနှတ် ခမ်း လေး စူ ပြီး ပြော တယ်..။ မေ အေး...နင် သိပ် လှ တာ ဘဲ.....ဟယ်..။6of9Recommended